Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » War Deg Deg Ah » Faafida COVID Waxay u horseedaa Jahawareer Qiimaha Hoteelka
Macaamiisha ku jira aragtida Boqortooyada Midowday, ee ku saabsan halka laga heli karo heerka ugu fiican, ayaa aad ugu jahwareersan masiibada, marka loo eego sahanka martida ee Hudheelka ee ugu dambeeyay ee BVA BDRC.
Warbixintu waxay ogaatay in xubinnimada barnaamijyada daacadnimada aysan u xaglin calaamadaha hoteelka, iyadoo OTAs ay sidoo kale ururinayaan xubno, iyagoo soo jeedinaya in istiraatiijiyad kale loo baahan yahay si loo jiido martida si toos ah boosaska.
Fikradaha macaamiisha ee halka laga heli karo heerka ugu wanaagsan ayaa doorbiday OTAs, oo ah 33% jawaab bixiyaasha, iyada oo mareegaha hoteelada ay ku dhow yihiin 27%, inkastoo labada ikhtiyaarba ay hoos u dhaceen saddexdii sano ee la soo dhaafay, laga bilaabo 41% iyo 28% siday u kala horreeyaan. Boqolkiiba dadka socotada ah ee aan garanayn ayaa labanlaabmay muddadaas, taasoo soo jeedinaysa jahawareer ka jira suuqa.
James Bland, maamulaha, BVA BDRC, ayaa yiri: "Silsilado huteelada caalamiga ah waxay dhisayeen barnaamijyadooda soo noqnoqda iyadoo ujeedadu tahay in ay si toos ah u ballansadaan oo ay yareeyaan kharashka sariiraha buuxinta milkiilayaashooda.
"Faafida waxay la macno tahay hoos u dhac degdeg ah oo ku yimid tirada dadka safarka ah ee shirkadda, kuwaas oo ka kooban inta badan xubnaha barnaamijka soo noqnoqda. Iyada oo suuqu aad ugu tiirsan yahay dadka safarka ah ee firaaqada ah, silsiladuhu waxay ku qasbanaadeen inay ku tiirsanaadaan kanaalada kale si ay u keenaan martida iyo, marka safarku dib u furmo, waa inay dib ula macaamilaan macaamiisha si ay u dhimaan qiimaha iibka. ”
Marka la eego kanaalada ballan-qaadista, 59% dadka safarka ah ee ganacsigu waxay door bideen goobaha summada huteelada, halka, ballan-qaadista xilliga firaaqada, 56% ay doorbideen dhammaan bogagga kale. Ee kanaalada ballansashada. booking.com ayaa ahayd tan ugu badan ee la booqdo, iyadoo 56% dadka socotada ah ay eegeen ama isticmaaleen, iyadoo mulkiilaha Premier Inn Whitbread uu yahay kan ugu booqashada badan ee goobaha astaanta huteelka ah, isagoo ku jira kaalinta sagaalaad ee liiska kanaalada.
Sida tan soo jeedin lahayd, Premier Inn wuxuu haystay faa'iidooyin summadaha iyo darajada summada, waxaa ku xigay Hilton Hotels & Resorts, ka dibna Holiday Inn.
Marka la eego wacyiga heerka sare, Premier Inn ayaa kaalinta ugu sareysa ka galay hoteelada dhaqaalaha, iyadoo Holiday Inn ay hogaamineyso suuqa dhexe, Hilton Hotels & Resorts oo ah adeega buuxa ee sare iyo Ritz Carlton oo ku yaal Luxury. Summada homestay, Airbnb ayaa si uun u hoggaaminaysay garoonka.
Isagoo ka hadlaya barnaamijyada daacadnimada, 40% dhammaan jawaab bixiyaasha waxay ahaayeen xubno ugu yaraan hal barnaamij ah, taasoo kor u kacday ilaa 64% dadka safarka ah ee ganacsiga. 23 boqolkiiba jawaab bixiyaasha Jiilka Y ayaa haystay xubin. Hilton Honors wuxuu ahaa barnaamijka ugu caansan, isagoo tirinaya XNUMX% jawaab bixiyaasha, oo leh barnaamijyada OTA - Expedia iyo hotels.com - ee ku xiga qiimeynta.
Soo jiidashada suuqa gudaha ee UK ee socotada wakhtiga firaaqada ayaa ah mid adag, iyadoo 80% martida wakhtiga firaaqada ay hore u ballansanaayeen joogitaanka gudaha, ama ay aad ugu dhowdahay, iyada oo nasashada magaalada ay tahay doorashada ugu caansan. Cadaadiska kharashka ee uu dareemay macaamilka ayaa sidoo kale ahaa qodob, iyadoo qiimaha lacagta lagu wado go'aannada ballansashada.
Bland wuxuu yiri: "Macaamiishu waxay aad ugu qanacsan yihiin fikradda ah in la dalbado fasax caalami ah, laakiin inta aan aragno caleemaha cagaaran ee safarka dibadda ah, ku dhawaad ​​​​laba jibaar in ka badan dadka qaangaarka ah ayaa ballansaday fasaxa UK inta lagu jiro Janaayo - dhacdadii ugu sareysay tan iyo bilawgii raadinta. .
"Raaxo leh fikradda joogitaanka hoteelada iyo noocyada kale ee guryaha lacag bixinta ah ayaa si weyn u booday iyadoo cabsida Omicron ay hoos u dhacday oo qaybta hoyga ay ku xirmeyso heerka caadiga ah ee kahor masiibada marka la eego heerarka raaxada macaamiisha.
"Waxa la arki doono ayaa ah in soo kabashadani ay sii jiri doonto, ama haddii ay tahay degdegga kama dambaysta ah ka hor inta aan kharashka-nololeedku bilaabmin qaniinyada. Sida aan ka soo aragnay sahamintayada, qiimaha ayaa darawal u ah macaamiisha waxaana jira arrimo kale oo nagu soo wajahan, oo ay ku jiraan kororka qiimaha tamarta iyo saameynta dhaqaale ee suurtagalka ah ee dagaalka Putin ee Ukraine. "
Suuqa xilliga firaaqada ee gudaha ayaa gacanta ku haya qaybta inta lagu guda jiro masiibada, iyadoo celcelis ahaan 3.8 safarro firaaqo ah la qaatay labadii sano ee la soo dhaafay, marka loo eego 1.3 safar ganacsi oo gudaha ah. Nasashada xeebta iyo nasashada waxay ahaayeen kuwo caan ah, maadaama cimilo aad u qurux badan aan la heli karin.
Daraasadda BVA BDRC waxay ogaatay in kalsoonida safarka ay sii kordheyso, iyadoo 47% macaamiisha UK ay ku faraxsan yihiin inay ballansadaan safar gudaha ah oo lagu qaado dhowr bilood gudahood iyo 32% inay hadda aadayaan. Maadaama martida ay aad ugu raaxeeyeen joogitaanka hoteelada, waxay sidoo kale bilaabeen inay ku noqdaan magaalooyinka. Marka la eego ujeedada mustaqbalka ee 12ka bilood ee soo socda, 47% waxay qorsheynayeen fasax magaalo, halka 34% ay rabeen inay booqdaan aag maxalli ah ama soo jiidasho iyo 32% waxay rabeen inay booqdaan asxaabta ama qaraabada.
Bland wuxuu yiri: "Qaar badan oo ka mid ah qaybaha waxay dareemeen, marka socdaalka caalamiga ahi uu noqdo mid la hubo, macaamiishu waxay ku noqon doonaan qaababkii hore oo ay ku noqdaan raadinta qorraxda xagaaga. Taa baddalkeeda waxaan arki karnaa in suuqa gudaha uu ka dhaafay masiibada, iyadoo saameynta walaaca ee ku saabsan qiimaha iyo saameynta safarka ee isbeddelka cimilada, laga yaabo inay sii ahaato mid kacsan.
"Si loo sii wado soo jiidashada martida, hoteeladu waa inay qiimeeyaan inaysan hadda haysan suuq la haysto, laakiin waa inay ku tartamaan, haddii aysan ahayn cimilada, markaa qiimaha iyo khibradda, maaddaama macaamiishu ay eegayaan inay ka faa'iidaystaan ​​​​waqtigooda iyo lacagtooda."
Airbnb Expedia Holiday Inn Hotel Hoteelka